Iqela labahleli be-Economia Finanzas | Ezezimali
Ezezimali iwebhusayithi eyazalwa ngo-2006 ngenjongo ecacileyo: ukupapasha ulwazi oluyinyani, olunekhontrakthi kunye nomgangatho malunga nelizwe lezoqoqosho nezemali. Ukufezekisa le njongo kubalulekile ukuba neqela labahleli abaziingcali kwicandelo kwaye abangenangxaki ekuthetheni inyani njengoko injalo; akukho mdla umnyama okanye nantoni na enjalo.
Kwi-Economics ye-Finanzas unokufumana ulwazi olwahluka-hlukeneyo olususela kwizigama ezisisiseko ezinje zithini iVAN kunye neIRR kwezinye ezintsonkothileyo ezinje iingcebiso zethu zokwahlula utyalomali lwakho ngempumelelo. Zonke ezi zihloko kunye nezinye ezininzi zinendawo kwiwebhusayithi yethu, ke ukuba ufuna ukufumanisa yonke into esithetha ngayo, eyona nto intle yile ngenisa eli candelo apho uza kubona uluhlu olupheleleyo lwe zonke izihloko ezigutyungelweyo.
Iqela lethu lipapashe amanqaku amanqaku ngezoqoqosho, kodwa zisekho ezinye izihloko ekufuneka sizigubungele. Ewe Ngaba ufuna ukujoyina iwebhusayithi yethu kwaye ube yinxalenye yeqela lethu lababhali kufuneka nje gcwalisa le fomu Kwaye siya kunxibelelana nawe ngokukhawuleza.
Uqoqosho yinto esinomdla kuyo ukusuka kumzuzu wokuqala esisebenza ngawo. Nangona kunjalo, uninzi lolu lwazi asilufundi, ke ndiyathanda ukunceda abanye baqonde iikhonsepthi zoqoqosho kwaye ndinike iingcebiso okanye izimvo zokuphucula ukonga okanye ukufezekisa.
Ndityala imali kwiimarike iminyaka, eneneni ngesizathu esinye okanye kwelinye ilizwe lotyalomali lundithandile ukusukela ndisesikolweni. Lonke olu phawu bendihlala ndilukhulisa phantsi kwamava, ukufunda, kunye nohlaziyo oluqhubekayo kwimisitho. Akukho nto ndinomdla kuyo njengokuthetha ngezoqoqosho.
Ndinomdla wolwazi, ngakumbi malunga noqoqosho kwaye ndigqithisela ulwazi lwam ebantwini ukuze bakwazi ukuphatha kakuhle imali yabo. Ewe kunjalo, ngokungakhathali kunye nokuzimela, iya kuba ilahlekile ngakumbi.
UJose Manuel Vargas obambe umfanekiso
Ndiyazithanda ezoqoqosho nezemali, yiyo loo nto ndingene kule projekthi ndinethemba lokuqhubeka nokufunda kuyo, kwaye ndabelana ngolwazi lwam, ndisazi ngako konke okwenzekayo kweli hlabathi.
Ndinomdla wokufunda ngoqoqosho kunye nezemali, kangangokuba izifundo zam ziye zaphela zinxulumene nale mimandla. Umnqweno wam kukufaka igalelo kulwabiwo ngokulinganayo lwezixhobo, nekufanele ukuba ziyinjongo yezoQoqosho njengeNzululwazi yezeNtlalo.
Igama lam ndinguJulio Moral kwaye ndinesidanga kwezoqoqosho kwiComplutense University yaseMadrid. Uthando lwam olukhulu luqoqosho / ezemali kwaye, ewe, lihlabathi elinomdla lotyalo-mali. Sele kuyiminyaka ngoku, ndinethamsanqa lokuba ndikwazi ukwenza imali ngokuthengisa kwi-Intanethi.